Nagu saabsan - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt Nagu saabsan | Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Faafinta Farxad Wanaagsan Sanadka Oo Dhan
La aasaasay bishii Maarso 2020, Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt waa goob ay ku shiraan quruxleyda Yuletide iyo heshiisyada wanaagsan. Dhiirrigelintayada Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt waxay ka timid sahamadeenna adduun. Si gaar ah, suuqyada kirismaska ​​ee aan ka helnay Vienna, Austria. Kadib socdaalkeenii Awstaria ee 2019, waxaan go'aansanay inaan abuurno bakhaar Kirismas ah oo aan leenahay. Rajada ah inaan istaagno, waxaan soo saarnay barxad dijitaal ah oo ay macaamiisha uga adeegan karaan wixii qalbigooda ku jira.
Waxaan jecel nahay inaan ka fikirno suuqeena Kirismaska ​​ee internetka hadiyad ahaan ku sii socota bixinta. Macno malahan haddii ay tahay xilliga gu'ga ama deyrta, ururintayada Kirismaska ​​waligood kuma guul darreystaan ​​inay soo jiitaan. Ka dib oo dhan, yaa aan jeclayn fasax qurux badan oo qurux badan? Alaabadayada waxaa loo heli karaa iibsashada sanadka oo dhan, markaa uma baahnid inaad sugto illaa xilliga qaboobaha si aad u dhufato alaabteenna kirismaska. Sida ugu fiican oo dhan, waxaa jira ikhtiyaar qof walba u furan.
Laga soo bilaabo ubaxyo iyo Ahraamta Kirismaska ​​ilaa dambiilo hadiyado ah iyo dahab, waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo ah qurxinta Kirismaska ​​iyo wanaagga. Qurxinta iyo baalasha ayaa ah kuwa kale ee ugu cadcad taageereyaasha. Haddii aad doorbideyso walxaha jilicsan ama qaybaha bayaanka, ururintayada ballaaran waxay noo oggolaaneysaa inaan rafcaan u qaadanno doorbidyo kala duwan. In kasta oo aan bixinno noocyo badan oo qurxinta kirismaska ​​ah, haddana waxaannu u ballan-qaadaynaa tayada mid kasta oo ka mid ah alaabteenna. Xitaa xiisaha badan ayaa ah halka ay ka soobaxaan gogoshayada, jaantusyada, iyo dahabkeennu.
Kirismaska ​​waxaa looga dabaaldegaa adduunka oo dhan, waana sababta aan ugu haysanno alaabada Jarmalka, Ruushka, Mareykanka, iyo Isbaanishka agabkeenna. Dhaqamada gaarka ah ee meelahan ayaa noo suurta geliya inaan bixino noocyo kala duwan. Naqshadaha Snowflake, Snowman fikradaha, iyo ku dayashada guryaha sinjibiil waa qaar ka mid ah qaybaha caadiga ah ee aad ka heli doonto. Haddii aad doorbideyso qurxinta aan caadiga ahayn, qurxintayada gecko iyo kuwa heysta waxyaabaha dabiiciga ah ee dhiirrigeliya ayaa kugu habboon adiga. Asal ahaan, Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt waa dheriga qurxinta qurxinta kirismaska, taas oo ka dhigaysa dukaankeenna internetka meel doorbid ah oo loogu talagalay dukaamaysiga fasaxa.
Waxaan ka soo rarnaa ugu horreyn Mareykanka, haddii aad doorato rarka caadiga ah ee Mareykanka dhexdiisa, waa bilaash. Waxaa intaa dheer, waxaan si dhakhso leh uga shaqeynaa amarrada, waxaanan ballanqaadeynaa in dhammaan walxaha si nabad ah loo geyn doono. Waxaan rabnaa inaan ku damaanad qaadno inaad ku qanacsan tahay wax iibsigaaga, markaa ha ka waaban inaad gaarto wixii ku saabsan soo celinta, joojinta, iyo bedelka Si aad ula socotid taariikhda, nala fiiri kan blog. Halkan waxaad ka heli doontaa cuntooyinka Kirismaska, qiimeynta filimada fasaxa, iyo inbadan.
Qoraa / Blogger
Baadh baraha bulshada: Facebook: Facebook.com/SchmidtChristmasMarket LinkedIn: Linkedin.com/company/SchmidtChristmasmarket Pinterest: www.pinterest.com/SchmidtChristmasMarket Twitter: twitter.com/MarketSchmidt
Haddii aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto wax kasta: Xiriirka xafiiska:
Oak Ridge Waqooyiga TX 77385
Fiiri Shirkadda Waalidka:Dhamaan ARK LLC